सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने ! पुरा खबर पढ्नुहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने ! पुरा खबर पढ्नुहोस
Prevभुटेको लसुन खाँदा हुने आश्चार्य जनक यस्ता फाइदाहरु ! जनिरखौ …
Nextआयो बिश्वास नलाग्ने भिडियो ! हेर्नुहोस् पागल बनाउने भिडियो
डलरको भाउ आहिले सम्मकै महगो , आज नेपाल पैसा पठाउदै हुनुन्छ? बढ्यो अरु यी बिदेशी मुद्राको भाउ …
ऋषि धमलालाई मेयर चौधरीको खरो जवाफ ,पत्रकारसँगको बिवादबारे गरे यस्तो खुलासा- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आजको राशिफलःबि.स.२०७६ साल कार्तिक २८ गते बिहिबार इश्वी सन २०१९ नोभेम्बर १४ तारीख…